अपह`रणमा परेकी गुल्मीकी २१ वर्षीय सम्झनाको श`व घर नजिकै बारीको कुनामा फेला ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/अपह`रणमा परेकी गुल्मीकी २१ वर्षीय सम्झनाको श`व घर नजिकै बारीको कुनामा फेला !
गुल्मीको रेसुगां नगरपालिका ३ भाडगाउँकी सम्झना खत्रीको श`व फेला परेको छ । लामो समयदेखि अ`पह`रणमा परेको भनिएकी उनको खोजि थालिएको थियो । उनको श`व घर नजिकै बारीको कुनामा भेटिएको बताईएको छ । घ`टनाको बारेमा प्रहरीले अ`नुस`न्धान गर्दैछ । गत माघ २९ गते जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका ३ भाडगाउँमा २१ वर्षकी सम्झना खत्री बोहोरालाई उनकै घरबाट केही न-चिनेका युवाहरुले बे-पत्ता बनाए ।
बुहारी ह-राएको खबर उनकी सासु तोमकला खत्रीले छिमिकीलाई जानकारी गराईन । खो-ज खबर गर्दा कतै पनि नभेटिएपछि घ-टना जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पुग्यो ।
फागनु १ गतेका दिन प्रहरीले सासु र उनका छोरा नेत्रबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलायो र बुहारी कसरी बेप-त्ता भईन सोधपुछ ग¥यो । केही समय हि-रास-तमा राख्यो घरमा सानो बच्चा भएको भन्दै सासुलाई प्रहरीले साझ घर पठायो । छोरालाई हि-रास-तमै राख्यो ।
अर्कोदिन बिहान घर नजिकै खनियाँको रुखमा ४८ बर्षीया तोमकला खत्री झु-ण्डि-एको अबस्थामा मृ-त फेला परिन । घरबाटै बे-पत्ता भएको छोरीको खो-जत-ला-स गरिदिनु प¥र्याे भन्दै सम्झनाको माईती मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर २ अमराईबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उ-जुरी दिए ।
कोभिड– १९ को कहर : बज्दैछ खतराको घण्टी !
दशैँमा गाउँघर आवतजावत नगर्न सरकारको आग्रह यदि जबर्जस्ती गरेमा कडा…..
bracking news::१२ बजेदेखि लकडाउन
bracking news::सुरु भयो फेरी कर्फ्यू : देउसीभैलो पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध